Umthetho wabucala - Popular Jewelry
ICANDELO 1 - SINTONANI NGENKCAZO YAKHO?
Xa uthenga into kwivenkile yethu, njengenxalenye yenkqubo yokuthenga neyokuthengisa, siqokelela ulwazi lomntu siqu osinika lona — igama lakho, idilesi kunye nedilesi ye-imeyile.
Xa ukhangela ivenkile yethu, nathi siyifumana ngokuzenzekelayo idilesi yekhompyutha ye-intanethi ye-intanethi (IP) ukuze usinike ulwazi olusinceda sifunde malunga nesiphequluli sakho kunye nenkqubo yokusebenza.
I-imeyili yokuthengisa (xa ikhona): Ngemvume yakho, sinokuthumela i-imeyili malunga nevenkile yethu, iimveliso ezintsha kunye nezinye izibuyekezo.
ICANDELO 2 - CONSENT
Sifumana njani imvume yakho?
Xa usinikezela ngolwazi lomntu siqu ukugqiba intengiso, qinisekisa ikhadi lakho lesikweletu, ubeke umyalelo, ulungiselele ukuhanjiswa okanye ubuyisele ukuthenga, sithetha ukuba uyavuma ukuqokelela kwethu nokuyisebenzisa ngenxa yesizathu esithile kuphela.
Ukuba sicela ulwazi lwakho lomntu ngesizathu sesibini, njengokuthengisa, siya kukubuza ngqo kwimvume yakho ebonisiweyo kwaye sikunikeze ithuba lokwala.
Ndiyichitha njani imvume yam?
Ukuba emva kokungena, utshintshe ingqondo, unokurhoxisa imvume yakho yokunxibelelana nawe, ukuqokelelwa okuqhubekayo, ukusetyenziswa okanye ukubhengeza ulwazi lwakho, nangaliphi na ixesha, ngokunxibelelana nathi ku- info@popular.jew jewelry okanye nge-imeyile e:
I-255 Canal Street New York New York i-US 10013
ICANDELO 3 - ISIFUNDO
Siyakwazi ukutyhila ulwazi lwakho lomntu xa sifuna umthetho ukuba senze njalo okanye ukuba uyaphula iMigomo yeNkonzo yethu.
ICANDELO 4 - SHOPIFY
Isitoreji sethu siphethwe kwi-Shopify Inc. Basinika i-platform ye-intanethi ye-intanethi esivumela ukuba sithengise iimveliso kunye neenkonzo zakho kuwe.
Idatha yakho igcinwa kwi-Storeify yedatha yokugcina idatha, yolwazi kunye ne-General Shopify application. Bagcina idatha yakho kwi-server ekhuselekileyo emva kwe-firewall.
Ukuba ukhetha isango lokuhlawula ngokuthe ngqo ukugqiba ukuthenga kwakho, ke u-Shopify ugcina idatha yakho yekhadi lesikweletu. I-encrypted ngokusebenzisa iKharity Payment Industry Data Standard Standard (PCI-DSS). Idatha yakho yokuthengwa kwezinto ezithengiweyo igcinwa kuphela ixesha elide xa kuyimfuneko ukugqiba ukuthengwa kwakho kokuthengwa. Emva kokuba kuphelile, ulwazi lwakho lokuthengwa kwentengiso luyasuswa.
Zonke izango lokuhlawula ngqo zihambelana nemigangatho ebekwe yi-PCI-DSS njengoko ilawulwa yiBhunga leMigangatho yezoKhuseleko ze-PCI, eyinzame ehlanganyeneyo yeempawu ezifana neVisa, MasterCard, i-American Express kunye ne-Discover.
Iimfuno ze-PCI-DSS zinceda ukuqinisekisa ukuphathwa ngokufanelekileyo kwekhadi lesikweletu ngetitolo lethu kunye nababoneleli ngeenkonzo.
Ukuze uqonde ngakumbi, ungaphinda ufune ukufunda iMigangatho yeNkonzo ye-Shopify (https://www.shopify.com/legal/terms) okanye iNkcazo yobumfihlo (https://www.shopify.com/legal/privacy).
ICANDELO 5 - IINKONZO ZENXUNYE
Ngokubanzi, abanikezeli benkampani yesithathu abasetyenziswe kuthi baya kuqokelela, basebenzise kwaye baxelele ulwazi lwakho kwimeko efunekayo ukuze bavumele ukuba benze iinkonzo abasinikezelayo.
Nangona kunjalo, abathengi abathile benkonzo-ntengiso, njengengeniso yokuhlawula kunye nabanye abaproseshini bokuthenga intlawulo, banemigaqo-nkqubo yabo yobumfihlo malunga nolwazi olufunekayo ukuba sibonelele ngokuthengelana kwakho.
Kuba bahlinzeki, sincoma ukuba ufunde imigaqo-nkqubo yabo yangasese ukuze uqonde indlela ulwazi lwakho lomntu oluza kulawulwa ngayo ngaba bahlinzeki.
Ngokukodwa, khumbula ukuba ababoneleli abathile bangabakho okanye banezixhobo ezifumaneka kummandla ohlukileyo kunokuba wena okanye nathi. Ngoko ukuba ukhetha ukuqhubeka nokuthengiselana okubandakanya iinkonzo zomniki-wesevisi wenkonzo yesithathu, ngoko ulwazi lwakho luya kuthobela imithetho yegunya (s) apho umniki-nkonzo okanye izibonelelo zalo zikhoyo.
Njengomzekelo, ukuba ukhona eCanada kwaye ukuthengiselana kwakho kuqhutywe yirejista yokuhlawula e-United States, ngoko ulwazi lwakho lomntu olusetyenzisiweyo ekuzaliseni olo mthengano lungaxhomekeke ekudaleni phantsi komthetho wase-United States, kuquka noMthetho wePatrioti.
Emva kokuba ushiye iwebhusayithi yethu yesitoreji okanye uhanjiswe kwiwebhsayithi yeqela lesithathu okanye isicelo, awusayi kulawulwa nguMgaqo-nkqubo weMfihlo okanye iMigomo yeNkonzo yethu.
Xa ucofa kwikhonkco kwivenkile yethu, banokukuqondisa kude kwiwebsite yethu. Asinabo uxanduva lwezenzo zobumfihlo zabanye amasayithi kwaye sikhuthaza ukuba ufunde ingxelo zabo zobumfihlo.
ICANDELO 6 - Ukhuseleko
Ukukhusela ulwazi lwakho lomntu siqu, sithatha amanyathelo okulondoloza kwaye silandele iinkqubo ezifanelekileyo zokuqinisekisa ukuba ayilahlekanga kakuhle, ingasetyenziswa kakubi, ifumaneka, ichongiwe, iguqulwe okanye ichithe.
Ukuba usinikezela ngolwazi lwekhadi lakho lesikweletu, ulwazi lufakwe ngekholethi usebenzisa ubuchwepheshe bekhompyutheni obungqinileyo (SSL) kwaye bugcinwe nge-encrypted AES-256. Nangona kungekho ndlela yokudluliselwa kwi-Intanethi okanye ukugcinwa kwekhompyutha kugcinwe i-100% ekhuselekileyo, silandela zonke iimfuneko ze-PCI-DSS kwaye siphumeza imilinganiselo eyongezelelweyo yemigangatho yemveliso.
ICANDELO 7 - COOKIES
Nalu uluhlu lweekhukhi esiyisebenzisayo. Sibahlule apha ukuze ukwazi ukukhetha ukuba ufuna ukuphuma kwi cookies okanye cha.
_session_id, uphawu oluyingqayizivele, iseshoni, Ivumela i-Shopify ukugcina ulwazi malunga neseshoni yakho (ibhendi, iphepha lokuhlahlela, njl.
_shopify_visit, akukho idatha egcinwe, Ukuqhubeka kwemizuzu ye-30 ekutyelelweni kokugqibela, Isetyenziswe ngabaxhasi bethu bee-intern traats tracker ukurekhoda inani lokutyelela
_shopify_uniq, akukho idatha egcinwe, iphela phakathi kobusuku (inxulumene nomveleli) ngosuku olulandelayo, Ibala inani lokutyelela kwisitoreli ngomthengi omnye.
Inqwelo, uphawu oluyingqayizivele, oluqhubekayo kwiiveki ze-2, Ukugcina ulwazi malunga neenqwelo zakho.
_secure_session_id, uphawu olulodwa, iseshoni
Storefront_digest, uphawu oluyingqayizivele, elingapheliyo Ukuba ivenkile inegama lephasiwedi, oku kusetyenziswa ukuchonga ukuba ngaba isivakashi sangoku sifikelele.
ICANDELO 8 - IMINYAKA YOKWENZA
Ngokusebenzisa le sayithi, ubonisa ukuba ubuncinane ubuninzi bexesha lenu kwimeko okanye kwiphondo lokuhlala, okanye ukuba uneminyaka yesininzi kwimeko okanye kwiphondo lokuhlala kwaye usinike imvume yakho ukuvumela nayiphi na Abaxhomekeke kumancinci ukusebenzisa le ndawo.
ICANDELO 9 - UTSHINTSHA KWENQUBOMGOMO YENKCAZO
Sigcina ilungelo lokuguqula le nkqubo yemfihlo ngasiphi na ixesha, ngoko nceda uyihlolisise rhoqo. Utshintsho kunye nokucaciswa kuya kusebenza ngokukhawuleza xa kuthunyelwa kwiwebhusayithi. Ukuba senza utshintsho lwempahla kulo mgaqo-nkqubo, siya kukwazisa apha ukuba ihlaziywe, ukuze uqaphele ngoluphi ulwazi oluqokelelayo, indlela esisebenzisa ngayo, kwaye phantsi kweziphi iimeko, ukuba kukho na, sisetyenziswa kunye / okanye sichaze .
Ukuba ivenkile yethu ifumaneka okanye idibaniswe nenye inkampani, ulwazi lwakho lungadluliselwa kubani abatsha ukuze siqhubeke nokuthengisa iimveliso kuwe.
IMIBUZO NENGCACISO YEZINKCUKACHA
Ukuba ungathanda: ukufikelela, ukulungisa, ukulungisa okanye ukucima naluphi na ulwazi lomntu malunga nawe, ukubhalisa isikhalazo, okanye ufuna nje ulwazi oluthe kratya qhagamshelana neGosa lethu lokuThobela iMfihlo kwi-info@popular.jew jewelry okanye ngeposi kwa